Tenga Mafungiro & Kushushikana Kunosimudzira Yakadzikama Hormone DHEA 25 mg | WoopShop®
Inosimudzira Balanced Hormone Levels inoderera nezera
Inotsigira Hutano Hwemweya
Inosimudzira mazinga eDHEA akaenzana anoderera nezera kubatsira kutsigira hutano hwakanaka.
Kushandiswa Kwakakurudzirwa: Tora piritsi 1, kamwe chete pazuva, nekudya.
Zvimwe Zvisungo: Microcrystalline cellulose, silicon dioxide, magnesium stearate, stearic acid, cellulose gum, maltodextrin, gum arabic.
Kwete: Mukaka, zai, hove, crustacean shellfish, nzungu dzemiti, nzungu, gorosi, soya bhinzi, mbiriso, mavara ekugadzira kana zvinonaka, shuga yakawedzerwa kana kuchengetedza.
Zvakakosha! Verenga ruzivo rwese uye yambiro usati washandisa.
Kwete kushandiswa nevanhu vari pasi pemakore gumi nemasere. Usashandise kana uine pamuviri kana mukoti. Bvunza chiremba kana ane rezinesi, nyanzvi yehutano ine ruzivo usati washandisa chigadzirwa ichi kana uine, kana uine nhoroondo yemhuri yegomarara rezamu, kenza yeprostate, kuwedzera kweprostate, chirwere chemoyo, kana yakaderera "yakanaka" cholesterol (HDL); kana iwe uri kushandisa chero chimwe chikafu chekuwedzera, zvinodhaka zvinodhaka kana over-the-counter drug. Usapfuure inokurudzirwa kushumira. Kupfuura zvinokurudzirwa kushumira kunogona kukonzera kukanganisa kwakakomba kwehutano. Zvikonzero zvinogona kuitika zvinosanganisira mburwa, kudonha bvudzi, kukura kwebvudzi kumeso (muvakadzi), hasha, kushatirwa, uye kuwedzera mazinga eestrogen. Rega kushandisa uye kufonera chiremba kana rezinesi, nyanzvi yehutano inokwanisa nekukurumidza kana iwe ukanzwa nekukurumidza kurova kwemoyo, dzungu, kusaona zvakanaka, kana zviratidzo zvakafanana.
Chengetedza munzvimbo inotonhorera, yakaoma.
Ramba uri kure nekusvika kwevana.
Kushumira saizi: 1 Tablet
Kushumira Nega Mudziyo: 300
Nhamba Kubatira Kushumira % DV
Calcium (kubva kuCalcium Carbonate) 50 mg 4%
*Daily Value (DV) haina kusimbiswa.
Kurongeka kwakabhadharwa 07.11.21, 05.01.22 yakasvika muMoscow. Kurongeka hakuna kutumirwa pakarepo, kwemazuva 3-5 (ikozvino ini handiyeuki zvechokwadi). Receipt muhofisi yepositi yeRussia. Yakarongedzwa zvakanaka. Muchitarisiko, isu hatigone kusiyanisa kubva kuodha neayherb. Sherufu yehupenyu kusvika Nyamavhuvhu 2025. Pamhedzisiro, ndinovimba, zvakare. Kana ikashanda, ndicharayira zvimwe.
Kutakura kwenguva refu. Ka4 akatumira pasuru kushop.